Sida loo sawiro ka iPhone in computer wareejiyo
Waa mid ka mid ah kuwa su'aalaha jawaabo badan oo iyaga ka mid ah kuwa ugu badan waa in xogta ay weli nabad iyo ammaan haddii habka siiyo waxaa la socda. Ayaa dhisay daaqadaha diraasad sidoo kale u oggolaadaan dadka isticmaala si aad u hubiso in ay sawiro iyo warbaahinta kale ee loo arko in si ka duwan taas oo ka dhigaysa suurta user si aad u hesho saamaynta cabsi badan. Sifooyinkaa waxaa ka mid ah taageero, gacanta sawir dhamaystiran oo slideshow kaasoo u ogolaanaya dadka isticmaala in ay sidoo kale beddeli goobaha warbaahinta fudayd iyo qanceen.
Part1: 1-riix kala iibsiga sawir iPhone in ay sawiro ka iPhone wareejiyo computer Part2: Isticmaalka Email inay sawiro ka iPhone wareejiyo computer Part3: Isticmaalka cable USB in ay sawiro ka iPhone in computer wareejiyo
Part1: 1-click kala iibsiga sawir iPhone in ay sawiro ka iPhone in computer wareejiyo
Wondershare TunesGo Retro waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu fiican oo u oggolaan dadka isticmaala in ay sawiro iyo warbaahinta kale wareejiyo ka iPhone in computer daaqadaha fudayd. Waxaa sidoo kale in la xuso in muuqaalada in lagu gundhig gudahood software ah waa kuwa aan laga heli karaa barnaamijyo software ah ku sifayn la mid ah. Waxaa jira faaidooyin kale oo la isticmaalayo Wondershare TunesGo Retro iyo qaar ka mid ah sida soo socota:
• Waxaa ku hayaa Fadilmo gaarka ah ee jaraa, iyo ma aha in uu bedelo oo dhan.
• Waa 100% ammaan in la isticmaalo.
• Isticmaalka barnaamijkan sida ay tilmaamaha lagu siiyay waa inuu xaqiijiyo in uu jiro jawi daruur ma waxaa ka mid ahaa taas oo ka dhigaysa nidaamka wareejinta ammaan ah.
• photos waxaa loo wareejiyay qaab of yaalla si loo hubiyo in waqtiga waa la badbaadiyey.
• Barnaamijka la soo saaro hab si loo hubiyo in dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta la soo bixi fudayd.
Codsigan ayaa shaki jidka marka ay timaado iPhone wareejinta xogta iyo ka PC bedelay. Shirkadda ayaa sidoo kale la siiyey user xarunta of degsado codsiga oo aan xataa u iibsigu si iibka waxaa loo dhigay ka dib markii raali buuxa oo punter uu doonayo oo kaliya. Ogolaashaha in barnaamijkan inay ka shaqeeyaan awood buuxda sidoo kale hubin doona in sawir iyo warbaahinta kale waxay heshiis ma uusan weli arin u user iyo hab-sami ah iyo in line sii shuruudaha macmiisha.
i. Download software Wondershare TunesGo Retro.
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in la raaco Dardar si loo soo dajiyo barnaamij software sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
iii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in la hubiyo in software la bilaabay sida hoos ku qoran:
iv. Telefoonkan waxa markaas in lagugu xiro kombiyuutarka via dekedda USB sida hoos ku qoran:
. v Hadda user ay u baahan tahay in guji photos ee guddiga bidix ee barnaamijka software sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
vi. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in dhoofinta in doorasho laga soo doorto bar ugu sareysa sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
vii. Laga soo bilaabo hoos u soo dhaadhacay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in "Dhoofinta in My Computer" waxaa loo doortay in ay dhammaystiraan geedi socodka ee buuxa:
Part2: Isticmaalka Email
Waxaa by fog habka ugu fudud ee ay u hubiyo in photos waxaa loo wareejiyaa computer oo aan ka kaaftoomi kasta iyo si ay u suurto gal user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa laga codsadaa in ay hubiyaan in nidaamka noqdo mid fudud oo is ku tiirsan .
i. Muddo ka menu ah iPhone user ay u baahan tahay in ay doortaan sawirada sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in ay doortaan sawirka gal wareejinta oo loo baahan yahay sida hoos ku qoran:
iii. Dhinaca geeska midig sare user ay u baahan tahay in guji edit sida ka muuqata shaxanka hoose;
iv. Dhinaca geeska hoose ee bidixda ee shaashada user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button share la sii adkeeyey sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
v On shaashadda soo socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in mail la soo xulay sida ka muuqata shaxanka hoose.:
vi. User ayaa haatan u baahan yahay si loo hubiyo in cinwaanka email waxaa qortay iyo sawirka waxaa loo diraa foomka lifaaqa sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
vii. By helitaanka email isla kombuutarka user ka bixi kartaa oo dhan photos ee foomka ku lifaaqan ee u dhamayso.
Part3: Isticmaalka cable USB
Waxa kale oo loo arki karaa mid ka mid ah habka ugu nabad badan uguna habboon in sidoo kale waa lacag la'aan iyo waxa loo arki karaa dhisay shaqeynta ah ee telefoonka. Ka dib waa habka ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in ay ku xidhmaan iPhone in PC la caawiyo ee cable USB sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.apple.com/itunes/download/ si loo hubiyo in nooca ugu dambeeya ee Lugood la soo bixi.
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in dardar la raacay si ay u hubiyaan in software la soo bixi:
iv. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in tab ka photos waxaa riixi ee guddiga bidix sida kaaga muuqata sawirka hoose:
. v Marka la sameeyo user u baahan yahay in u hagaagsan sawirada sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
vi. Sida tallaabo la soo dhaafay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhanka codsan waxaa riixi si aad u hesho sawirada kombuutarka.
The geedi socodka in lagu soo sheegnay in tutorial waxan xaq kuma tihid ku egtahay kala iibsiga sawirka laakiin user waxay kalee codsan karaan habkan si ay u hubiyaan in videos iyo walax kale oo madadaalo waxaa loo wareejiyey PC oo aan ka kaaftoomi kasta. Ka hor intaadan dalban tutorial waxa ay sidoo kale waxaa lagula taliyey in la hubiyo in tallaabada kasta oo si fiican loo codsatay iyo tallaabada xigta waxaa la socda kaliya hal mid ka mid ah hore ayaa guul. Ka hortag user ka heli kartaa arrimaha taas oo ay noqon kartaa in foomka ee iibsiga xogta ama dhibaato in ay yihiin lama filaan ah taasoo keentay in qalab iyo sidoo kale info dhaawac xasaasi ah.
6 Su'aalaha Inta badan-weydiiyo ee ku saabsan isticmaalidda HTC nidaameed ee Windows 8/7 / XP
> Resource > Windows > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone in Computer